Orinasa fanodinam-bidy hozatra, mpamatsy - mpanamboatra efijery vibration China
Ny takelaka lamba dia natao tamina fitaovana manokana ary manana androm-piainana lava izy; ny hafainganam-pandehan'ilay takelaka sieve dia 800 heny / min, ary ny hatezeran'ilay fitaovana dia 50g; ny fanitsiana ny takelaka sivana dia tsy mila baoritra, noho izany dia mora ny manala sy manolo.
Sarimihetsika mihetsiketsika miovaova amin'ny akondro
Ny efijery mihetsiketsika karazana akondro Czxd dia karazana efijery mitovy andraikitra mavesatra mitovy lanja, izay ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana fitiliana ny fitrandrahana volavolan-dalàna sy fitafiana hitafy lamba. Noho ny fandevonan-kanina sy ny fitrandrahana ny haitao mandroso vahiny, ny orinasanay dia namolavola sy namokatra efijery mihetsiketsika karazana banana czxd.
Sarimihetsika fanodinam-peo mihetsiketsika matetika an'ny GPS
Mba hahafahana mamaly ny filan'ny fanarenana slime sy ny fanodinana fitaovana tsara ary ny fanasokajiana, ary hahatratrarana ny tanjon'ny fahaiza-manao fanodinana lehibe, ny fihenan'ny fihenan-tsakafo ary ny fahaiza-mampifanaraka matanjaka, ny toetran'ny mekanika avo lenta ary ny fihoaram-pahefana.
Ny efijery zezika simika HFS dia karazana efijery mihetsiketsika. Ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny fanaovana zezika zezika maro karazana sy akora simika betsaka hafa. Ny milina fanaraha-maso zezika simika karazana HFS dia nampiditra ny firafitry ny "terakot" amerikana sy ny teknolojia vaovao amin'ny rivet an'ny boribory. Tabataba ambany, fahombiazan'ny fitiliana avo ary fikojakojana mety.
SZR andian-tsarimihetsika mafana be mihetsiketsika dia ampiasaina indrindra amin'ny fanasokajiana voan-kazo sinter antonony sy kely misy hafanana 600-800oc amin'ny indostrian'ny metalurgique, ary hamita ny fizarana fanamiana amin'ny fitaovana fampangatsiahana.
Pikantsary mihetsiketsika ambony sy ambany
Ny efijery mihetsiketsika ambony sy ny efijery mihetsiketsika ambany dia ny takian'ny mpanjifan'ny orinasanay. Ny efijery mihetsiketsika dia noforonina sy novokarina tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny toetra spatial.
Efijery mihetsiketsika Boom
Xbzs series shell arm vibrating efijery dia karazana fitaovana fitiliana vaovao. Ampiasaina indrindra izy io amin'ny fisavana eo ambanin'ny fatana fandoroana ary mety amin'ny fanasokajiana ireo fitaovana lehibe, fitaovana antonony sy kely.
ZDS series elliptical mitovy hatevin'ny efijery
Ny efijery mitovy matevina dia ampiasaina amin'ny fanasokajiana ny sinter, ny pellet sinter ary ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany amin'ny indostrian'ny metalurgique, ary ny fanasokajiana sy ny fizahana sivana amin'ny indostrian'ny arintany. Raha ampitahaina amin'ny karazana masinina sieving hafa mitovy amin'ny famaritana azy, lehibe kokoa ny fahaizan'ny fanodinana ary avo kokoa ny fahombiazan'ny fitiliana.
Ya (k) andian-tsarimihetsika boribory goavambe
Ya (k) andian-tsarimihetsika boribory boribory marobe dia fitaovana fitiliana lehibe natao ho an'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany. Izy io dia mety amin'ny famolavolana fitaovana lehibe. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahaiza-manao fanodinana lehibe, ny fahombiazan'ny fitiliana avo, ny faharetana matanjaka ary ny fikojakojana mety.
ZK series series get vibrating
Ny efijery mihetsiketsika an'ny Linear dia ampiasaina indrindra hanasokajiana amin'ny fitrandrahana arintany, fitrandrahana, akora fananganana, indostrian'ny herinaratra sy simika, ny efijery andiany dia mandray ny rivet mihantona indrindra amin'ny rivet hidin-trano, miaraka amina rafitra tsotra, matanjaka sy maharitra, tabataba ambany, fametrahana mora sy fikojakojana, sns.
ZSG Linear vibrant efijery
ZSG andian-tsarimihetsika mihetsiketsika mivantana dia fitaovana vaovao sy mahomby, izay manana ny toetran'ny fahombiazana avo, akanjo ambany, tabataba ambany, androm-piainana lava, fisorohana ny fandotoana, fanamorana ara-toekarena, fitsitsiana angovo ary fisehoana tsara tarehy. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fizahana fizahana poti lehibe, salantsalany ary kely amin'ny fitrandrahana, metallurgy, arina, indostria simika, herinaratra, fitaovana fananganana ary indostria hafa.